Daawo: Buuq xoogan oo hareeyey kulanka Golaha Shacabka + sababta - BANAADIRSOM
Home WARARKA MAANTA Daawo: Buuq xoogan oo hareeyey kulanka Golaha Shacabka + sababta
Muqdisho (Banaadirsom) – Wararka naga soo gaaraya xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta buuq xoogan uu hareeyey kulan ay halkaas ku leeyihiin xildhibaanada cusub ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federalka Somalia.
Qaar ka mid ah xildhibaanada oo la hadlay Wariyeyaasha ayaa si adag uga hadlay arrintan, waxayna sheegeen in lasoo xareeyey xubno aan waday kaararka aqoonsiga.
“Dad aan sharci aheyn oo kaar aan heysanin in fowdo lagu soo geliyo waa qaskii laga waday 5 sano ee u dambeysay baarlamaanka,” ayey tiri mid ka mid ah gabdhaha xildhibaanada ah ee lagu soo doortay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Sidoo kale waxay intaasi kusii dartay in uu qal-qal ku jiro amnigooda, waxayna baaq u dirtay guddoonka cusub ee Golaha Shacabka iyo laamaha ammaanka.
“Baarlamaanka, xogheyntiisa iyo laamaha waxaan ka codsaneynaa dad aan sharci aheyn oo kaarar aan waday ayaa lasoo geliyey ammaankeena Save ma’aha” ayey sii raacisay.
Arrintan ayaa waxaa ku kala qaybsamay xubnaha baarlamaanka, taas oo keentay inay dood xoogan hareyso kulanka maanta ee Golaha Shacabka oo ah kii ugu horreeyey ee uu Goluhu yeelanayo, kadib doorashadii guddoonka oo dhacday 27/28-kii bishaan April.
Previous articleMas’uul ka tirsanaa maamulka Yaaqshiid oo toogasho lagu dilay
Next articleSheekh Aadan Madoobe oo xilka la wareegay, kadibna ku dhowaaqay…